FAQ - Happy Live
FAQ iPTV ?
iPTV အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် သိထားသင့်သည့် အချက်အလက်များ။
Happy TV အသုံးပြုဖို့အတွက် WiFi or အင်တာနက်လိုအပ်ချက်?
Happy TV အသုံးပြုဖို့အတွက် WiFi or အင်တာနက်လိုအပ်ချက်? 15Mb or 20Mb လောက်လိုအပ်ပါတယ်။ 10Mb တွေက တစ်ခါတစ်လေ အင်တာနက်လိုင်းအပြည့်အဝ မရတဲ့ အခါ၊ လိုင်းကျတဲ့အခါတွေနဲ့ အသုံးပြုတွေ များတဲ့အခါ လိုင်းကျပီး iPTV ကြည့်ရှုတဲ့နေရာမှာ ရုပ်သံထစ်ခြင်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးက 15Mb to 20Mb ကြားလောက်မှ iPTV အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Android Box တွေမှာ ဘာလို့ လိုင်းတွေကြည့်နေရင်း ထစ်ထစ်သွားတာလဲ ?
Android Box တွေမှာ ဘာလို့ လိုင်းတွေကြည့်နေရင်း
ထစ်ထစ်သွားတာလဲ ? 🤔🤔🤔🤔
Android Box ဝယ်ကြည့်တဲ့လူအများစုမှာ ပြသနာတစ်ခုရှိပါသေးတယ် 😤 အိမ်မှာတပ်ထားတဲ့ WiFi လိုင်းက 10 Mbps ဆိုပေမယ့် ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်း ဒါမှမဟုတ် ဘောလုံးပွဲကြည့်နေရင်း အဝိုင်းလည်ပြီးရပ်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက် နဲ့ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရတာမျိုးပါ 🥴🥴 WiFi ကို Mbps အများကြီးယူထားပြီး အဝိုင်းလေးက ဘာကြောင်လည်ရတာလဲ 🤔 Ram များနည်းလို့လား ??? WiFi လိုင်းကျနေတာလား ???
Internet ကနေဘောလုံးပွဲကြည့်တာဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ရှင်ကြည့်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် Download Speed နဲ့ ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ် ၊အိမ်မှာတပ်ထားတဲ့ WiFi က Speed test နဲ့တိုင်းကြည့်ရင်ကောင်းနေပေမယ့် စက်မှာအနှောက်ယှက်ဖြစ်စရာ အဝိုင်းလေးလည်နေတာမျိုး ၊ ထစ်ထစ်သွားတာမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင် အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းအချို့ကိုသုံးစေချင်ပါတယ်။ ✌️✌️✌️
အိမ်မှာစုပြီး သုံးနေတဲ့ ဖုန်းအများစုကို ခဏလျော့ချထားပါ၊ မသုံးဘဲနေတဲ့ဖုန်းအချို့ကို WiFi ပိတ်ထားပေးလိုက်ပါ။ 👍
အသုံးပြုနေတဲ့ Android Box က WiFi နဲ့ဝေးနေရင် TV သို့မဟုတ် စက်နဲ့အနီးဆုံး နေရာကို ရွှေ့ထားပေးပါ👍 WiFi စက်နဲ့နီးလေလေ အသုံးပြုရတာပိုအဆင်ပြေလေပါ ✌️ ဖြစ်နိုင်ရင် ကြိုးတိုက်ရိုက်ထိုးကြည့်တာလိုင်းပိုငြိမ်ပါတယ်…..
Android Box ထဲကမလိုအပ်တဲ့ အပလီကေးရှင်းတွေ ရှင်းပစ်ပါ ၊ စက်က လေးနေပြီး လိုင်းပါလိုက်ကျ သွားတတ်ပါတယ်၊အမှန်တစ်ကယ်အသုံးပြုမယ့်အပလီကေးရှင်းတွေဘဲထားပါခင်ဗျား။ 👌
တစ်ခါတစ်လေ ကြည့်နေရင်း လိုင်းက ခဏခဏ ထစ်နေရင် စက်ကို ခဏပိတ်ထားပြီး အနားပေးထားပါ 🍎 ပြီးတော့မှ ကြည့်လက်စ အပလီကေးရှင်းကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။ 👌
အပလီကေးရှင်းတွေ အများကြီးထည့်ကြည့်ပြီး ပြန်လည်းမဖျက်ချင်ဖူးဆိုရင်တော့ စက်ထဲမှာ တစ်ခါတည်း Storage များများပါတဲ့စက်ကို ဝယ်သုံးပါဗျ ။😁
ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ အင်တာနက် speed ဆိုတာက ‌ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ သူ့ရုံး ကြားထဲက speed ကိုပဲပြပေးတာပါ ကျွန်တော့တို့ကြည့်နေတဲ့ လိုင်းတွေက ကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ အင်တာနက် ISP ရဲ့ ရုံးမှာရှိတာမဟုတ်ပဲ အနည်းဆုံး SG တို့ USA တို့ဘက်မှာပဲရှိကြတာများတော့ တကယ် အဲဒိဘက်ကိုထွက်သွားရင် သူတို့ပြောထားတဲ့ speed အပြည့်မရပါဘူး အဲဒါကို သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Android Box ဟာ Android Phone လိုပါပဲဆိုတာ အမြဲ အမှတ်ရစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
iPTV အသုံးပြုပြီး ဘော်လုံးပွဲတွေကြည့်ရှုတဲ့ နေရာမှာ မူရင်း ထက်ရုပ်သံနောက်ကျပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့နောက်ကျပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ iPTV ဆိုတာ အင်တာနက် Server အဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းလာပီးမှ ကျနော်တို့ဆီကို ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
iPTV အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေဖြင့် သိထားသင့်ပါတယ်။
Happy TV Packages ဝယ်ယူသူများကို Devices (3) ခုအထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Happy TV Network မှ Users တွေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်
Happy TV Packages ဝယ်ယူသူများကို Devices (3) ခုအထိ
အကောက်တစ်ခုဝယ်ယူပီး Devices (3) ခုသုံးလို့ရပါတယ်။ Allow 1 IP3Devices
Happy TV Network ကိုအသုံးပြုရင် ရုပ်သံထစ်နိုင်လား? Youtube နဲ့ iPTV ခြားနားချက်။
Happy TV Network ကိုအသုံးပြုရင် ရုပ်သံထစ်နိုင်လား?
အဲဒီအတွက် ကျနော်ပိုစ့်တစ်ခု ရေးတင်ခဲ့ပီးပါပီ။ အခုပို့ကတော့ Youtube နဲ့ iPTV ဘာကွာလည်းဆိုတာ အထိကထားပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။တစ်ချို့ ကလာပြောကြတယ်၊ WiFi or Internet ကောင်းကောင်းသုံးထားပါရက်နဲ့ iPTV ကြည့်ရင် ရုပ်သံထစ်နေပီး၊ Youtube ကြည့်ရင်မထစ်ဘူးဆိုတာတွေ ကျနော်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
Youtube ဆိုတာ ဒေါ်လာ ဘီယံပေါင်းများစွာအကုန်အကျခံပီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး ရုပ်သံပလက်ဖောင်းတစ်ခုပါ။သူလည်း အလွန်ကို ကြီးမားတဲ့ Server တွေကိုအသုံးပြုပီး ရုပ်သံတွေကို Users တွေဆီကို ပြန်လည်မျှဝေပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ Youtube ပေါ်ကနေ Video တစ်ခုကိုကြည့်တယ်ဆိုကျပါစို့။ အင်တာနက်သိပ်မကောင်းလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ သူ့မှာ ရွေးချယ်စရာ quality တွေရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အင်တာနက်လိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတာကို ရွေးပီးကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုက သူတို့သုံးထားတဲ့ Server System တွေဟာလည်းအရမ်းကို တန်ဖိုးကြီးပြီး အရမ်းကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ …
iPTV နဲ့ဘာကွာသွားလည်းဆိုတော့ iPTV ဆိုတာ Youtube လိုသီးသန့် Server တစ်ခုမဟုတ်ပဲ နာမည်(Name)တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းကို နောက်ကျမှ ကျနော် ပိုစ့်တစ်ခုအနေဖြင့်သီးသန့်တင်ပေးပါဦးမယ်။
ဟုတ်ပီ Youtube ကြည့်ရင်မထစ်ဘူး ၊ iPTV ကြည့်ရင်ထစ်တယ်ဆိုတာတွေကို ကျနော်ဆက်ပီး ပြောပါမယ်။
Youtube ကနေ Video တွေကြည့်တဲ့အခါ အင်တာနက်လိုင်းတွေဟာ iPTV နဲ့ယှဉ်ရင်သိပ်မလိုအပ်ပါဘူးခင်ဗျား။အနီးစပ်ဆုံးပြောပြရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ Video File တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်ထားပီး ကြည့်တာနဲ့ ဒေါင်းလုပ်မလုပ်ပဲ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်တာနဲ့ ကွာသလို ကွာခြားပါတယ်။ iPTV ကတော့ Video or File တွေကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်တဲ့အခါ အင်တာနက်လိုင်းကောင်းကောင်းလိုအပ်သလိုပါပဲ, အင်တာနက်လိုင်းကောင်းဖို့ဆိုတာ သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျား. ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အရုပ်ရော အသံရောအဆင်ပြေပြေကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေတာနဲ့ သဘောတရားတူညီလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးကနေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ iPTV သုံးပီး Channels တွေကြည့်ရှုတဲ့အခါ အင်တာနက်လိုင်းဟာ 10Mb or 20Mb ကြားဟာလိုကို လိုအပ်ပါတယ်။ 10MB or 10MB အောက်နည်းတဲ့ WiFi လိုင်းတွေယူထားပီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ်၊ iPTV နဲ့ရုပ်သံကြည့်တဲ့အခါ ထစ်မှာက သေချာပေါက်ပါပဲ။ လုံးဝကိုအဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျား။
iPTV Channels တွေကိုဝယ်ယူကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလည်း WiFi ကိုအသုံးပြုပီးကြည့်ရှုတဲ့အခါ ရုပ်သံထစ်တာတွေဖြစ်လာရင် ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ Server ကလား, ဒါမှ မဟုတ် အင်တာနက်လိုင်းကြောင့်လားဆိုတာ သေချာအောင် WiFi ကနေ Data Mode ကိုပြောင်းပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲလောက်ဆိုရင်တော့ Youtube and iPTV တို့ရဲ့ ကွာခြားချက် အင်တာနက်လိုအပ်ချက်ကို အနည်းငယ် သိရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျနော်ပြောပြတဲ့အချက်တွေထဲမှာ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။
Happy TV Network ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ ရုပ်သံထစ်နိုင်လားဆိုတာကို အရင်ကပိုစ့်တစ်ခုမှာ လည်းကျနော်တင်ပေးဖူးပါတယ်။အောက်ကလင့်ကနေ လေ့လာပေးပါခင်ဗျား။
Happy TV Network Users များလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။
Happy TV Server ကိုအသုံးပြုရင် ရုပ်သံမထစ်ဘူးဆိုတာ စိတ်ချရပါ့မလား?
တစ်ခုရှိတာက iPTV Channels တွေကိုကြည့်ရှု့တဲ့အခါ အင်တာနက်လိုင်းကို အသုံးပြုပီး ရုပ်သံတွေကို ကြည့်ရှု့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အင်တာနက်လိုင်းကောင်းမကောင်းဆိုတာ အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ချို့ကပြောကြတယ် ကျနော်/ကျမ WiFi Mb အများကြီးယူထားတာတောင် iPTV ကြည့်ရင် ထစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကို ကျနော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိ ဈေးကွက်မှာရနေတဲ့ အင်တာနက် အမြန်နုန်းဟာ ဝယ်ထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းအပြည့်မရပါဘူး။လူကြီးမင်းတို့ အိမ်မှာ WiFi ကို Mb အများကြီးတတ်ထားပီး တစ်ယောက်ယောက်က Download တစ်ခုလုပ်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် WiFi Users တွေများနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် WiFi Provider တွေဆီကပေးတဲ့ Ping Time မငြိမ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီအခါကျရင် iPTV အသုံးပြုတဲ့အခါ ရုပ်သံထစ်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရုပ်သံထစ်တာတွေဟာ iPTV Serverကြောင့်လားဆိုတာ သေချာအောင် WiFi ကနေ Data ဖြင့်ပြောင်းလဲအသုံးပြုပီး စမ်းသပ်စေချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်အသုံးပြုမယ့် Devices (စက်တွေ) မှာပါဝင်တဲ့ CPU , Momory စတဲ့ Hardware လိုအပ်ချက်တွေ နိမ့်နေရင်လည်း ရုပ်သံထစ်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ဝယ်ယူအသုံးပြုမယ့် iPTV Channels တွေကို မဝယ်ယူခင်အစမ်းတောင်းယူကြည့်ရှုပီး စမ်းသပ်ကြည့်ရှု့သင့်ပါတယ်ခင်ဗျား…
Happy TV Network Users များအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။
Users များနဲ့အတူရှိနေမည့် Happy TV Network Server…
Happy TV Network မှာဘာဖြစ်လို့ လိုင်းတွေက 5000 ကျော်, 10000 ကျော် မပါဝင်တာလဲ?
ဟုတ်ကဲ့အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ Users တွေကို အကောင်းဆုံး Channels တွေကို ပေးချင်လို့ပါ။
Channels ပေါင်း 10000 ကျော်ကို ကျနော်တို့ ထည့်ပေးဖို့အတွက်အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် မြန်မာ Server ဖြစ်လို့ပါခင်ဗျ။
ကျနော်တို့ Happy TV Network Server မှာ လိုင်းပေါင်း (400) နီးပါးပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း နေ့တိုင်း ကျနော်တို့ ကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ့် လိုင်းတွေကို စီစစ်ပီး ထပ်ထည့်ပေးနေပါတယ်။
အခု အဓိကက Sports (ဘော်လုံး)ရာသီဆိုတော့ အိမ်မှာအင်တာနက် တပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဈေးသက်သက်သာသာဖြင့် ကြည့်လို့ရအောင် အဓိကထားပီး လုပ်ပေးနေတာပါခင်ဗျား။ ဘော်လုံးရာသီပီးတာနဲ့ Movies and Entertainment ဖက်ကို အားထည့်ပီးထပ်မံပီး ဖြည့်ပေးသွားပါ့မယ်ခင်ဗျ။
လိုင်းပေါင်း 5000, 10000 ကျော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Server တွေဟာ သူတို့ Server မှာဘာလိုင်းတွေပါဝင်ပါသလဲဆိုတာသေချာမပြောနိုင်ကျတာများပါတယ်။ လိုင်းများရင်ပီးရောဆိုပီး ထည့်ထားတဲ့သဘောလည်းသက်ရောက်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ တွေကရောလိုင်းတွေအားလုံး ကြည့်ဖြစ်ကြရဲ့လား။အသုံးဝင်ရဲ့လား။ တကယ်ကြည့်ဖြစ်တဲ့လိုင်းတွေလည်းနည်းပါတယ်။ Skynet မှာပဲ ကြည့်ဗျား။ ကိုယ်ဝယ်ထားပီး မကြည့်ဖြစ်တဲ့လိုင်းတွေအများကြီးပါ။ SkyNet ဆိုတာ ကျနော်တို့ iPTV တွေလို လိုင်းအများကြီးမပါပါဘူး။
ကျနော်တို့ Happy TV Network က Happy TV Network Server မှာထည့်ပေးထားတဲ့လိုင်းတွေကို သေချာစောင့်ကြည့်ပီး offline ဖြစ်နေတဲ့ Channels တွေကို Online ဖြစ်အောင် အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပီး Users တွေအဆင်ပြေပြေ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် အမြဲတမ်းအလေးထားပါတယ်။ ပြောချင်တာက လိုင်းနည်းနည်းလေးနဲ့ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်လေး ဖြစ်အောင် သေချာလေး လုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျား။လိုချင်တဲ့ လိုင်းတွေကို Happy TV Network Facebook Page Messenger ကနေလာပြောရင်လည်း အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် ထည့်ပေးပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ့်လိုင်းတွေကိုလည်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ထည့်ပေးသွားပါ့မယ်ခင်ဗျား။
Happy TV Network Users များနဲ့အတူရှိနေမယ့် Happy TV Network 🙂